fiber optic အလင်းစတားမျက်နှာကျက် Kit အလင်းများကားမျက်နှာကြက်အလှဆင်မိုဃ်းအလင်းအိမ် - တရုတ် KepuAi Photoelectric
အဆုံးထုတ်လွှတ်မှု fiber optic
ဘေးထွက် Glow fiber optic
fiber optic ပန်း
fiber optic အလင်းကိရိယာအစုံ
fiber optic ပန်းမီးခွက်, မီးမိုးလုံလေလုံအလှဆင် optical,f...
fiber optic အလင်းရင်းမြစ်, illumination, ပရိုဂျက်တာ
fiber optic အလင်းစတားမျက်နှာကျက် Kit အလင်းများကား ceilin ...
fiber optic အလင်းရောင်ရေကူးကန် fiber optic cable ကိုအခင်း ...
ပူပြင်းတဲ့ fiber optic chandelier စားသောက်ဆိုင်ဆွဲပြားအလင်း ...
25W RGBW fiber optic မိုဃ်းကိုရွာစေကာစရာကုလားကာရေတံခွန် fibe LED ...
RGBW LED ကိုဖိုင်ဘာအော့ပတစ်အလင်းစတားမျက်နှာကျက် Kit အလင်းများ
နံရံနဲ့ ceilin များအတွက်ဖိုင်ဘာ optic ကြယ်ပွင့်မျက်နှာကျက်ကိရိယာအစုံ LED ...
fiber optic အလင်းစတားမျက်နှာကျက် Kit အလင်းများကားမျက်နှာကြက်အလှဆင်မိုဃ်းအလင်းအိမ်
အလင်းရင်းမြစ်: 5W RGBW + RF ဝေးလံသော controller ကို
ဖိုက်ဘာအချင်း: 0.5mm / 0.5 + 0.75mm
အရေအတွက်: 200 strands - 450 strands
စျေးနှုန်း: $ 37- $ 88 (ကမော်ဒယ်မှတက်မယ့်)
1. အရောင်အသွေးစုံသော 5W RGBW 8 အရောင်ကို LED Optic အလင်းများစတားမျက်နှာကျက် Kit ပြောင်းခြင်း
/ off ခလုတ်, အဝေးမှထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်, 20 မီတာဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု distence, အရောင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်မြန်နှုန်းညှိအပေါ် 2. Remote ထိန်းချုပ်။
အဘယ်သူမျှမလျှပ်စစ်မီး, အပူ, ခရမ်းလွန်နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့်အတူ 3. အဝေးမှအလင်းရောင်။
ပုံစံ light source ဖိုက်ဘာအချင်း
AL-QCTZ-1 5W RGBW + RF ဝေးလံသော controller ကို 0.5mm AiLi ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူး2မီလီယံ 200 strands
AL-QCTZ-2 2.5m 200 strands
AL-QCTZ-33မီတာ 250 strands
AL-QCTZ-4 3.5m 300 strands
AL-QCTZ-5 2.5m +3မီတာ + 3.5m 300 strands
AL-QCTZ-6 2.5m +3မီတာ + 3.5m +4သန်းတန် 400 strands
AL-QCTZ-7 0.5mm + 0.75mm 2.5m + 3.5m 300 strands
AL-QCTZ-8 0.5mm + 0.75mm 2.5m + 3.5m + 4.5m 450 strands
ကျေးဇူးပြု. အာရုံစူးစိုက်မှုကို: အလင်းအင်ဂျင်ဗို့အား 12V ဖြစ်ပါသည်, မဟုတ်ရင်, စမ်းသပ်ဖို့ 220V မှ contect ပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး, အင်ဂျင်ထွက်ကိုမီးရှို့လိမ့်မည်။
ရှန်ကျန်း Kepuai photoelectric နည်းပညာ Co. , Ltd မှ တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် fiber optic နဲ့ LED အလင်းရောင်စနစ်များတစ်ဦးပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် 2008 ကတည်းက။
ငါတို့သည် အတှေ့အကွုံနှစ်ပေါင်းများစွာ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းနှင့်မှန်မှန်အရှိဆုံးဂုဏ်သတင်းအချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ် အလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာများနှင့်ဗိသုကာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူ ခိုင်မာသောဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့န်ထမ်းများ, ငါတို့ Longgang ခရိုင်ရှန်ကျန်း, တရုတ်၌အကြှနျုပျတို့၏ 20000 စတုရန်းပေမှာအိမျကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအားလုံးထုတ်လုပ်ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များ, ထို့ပြင်ကျနော်တို့ရှိသည် Huaqiang မြောက်အမေရိကအတွက် proformance စတိုးဆိုင် client များ '' စတိုင်စစ်ဆေးခြင်းကိုဘို့ ။ တစ်ခုလုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကျော်ကျွန်ုပ်တို့၏ Self-မှီခိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ထက်အမိန့်အပေါ်ပိုမိုတိုတောင်းခဲကြိမ်ရှိသောလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' အတိအကျလိုအပ်ချက်များကို လိုက်. ဖြစ်ကြောင်းစနစ်များကိုမီးထွန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်မဟုတ်သာ။
သငျသညျ, ကြယ်ပွင့် effect ကိုအလင်းရောင်နှင့်အတူကာစီနိုလောင်းကစားရုံထွက် fit အရောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အလင်းအိမ်အတူရေကူးကန်ကို install, ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့နိုင်ပါတယ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးတည်း-of-a-ကြင်နာ chandelier ကော်မရှင်နာမှရှာကြသည်ရှိမရှိဒီတော့ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အဖြေတစ်ခုပေး.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသုံးသူတွေ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, client နှင့်ဖြန့်ဖြူးအပေါ်အာရုံစိုက်
, စျေးကွက်သို့ထွက် Get နှင့်နားထောင်ရန်စောင့်သင်ယူ
insatiably စပ်စု Be
စံအထုပ်: ပုံး Box ကို
Chandelier အထုပ်: သစ်သား Box ကို
2, ကျွန်တော်နမူနာ get နိုင်သလား?
3, ငါဘယ်လိုကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့် fiber optic ပြင်ပရှုခင်းအလင်းကို install နိုင်မလဲ?
မည်သည့်မေးခွန်းများကိုပါလျှင်, carrie@szkepuai.com မှာငါ့ကိုအီးမေးလ်အခမဲ့ခံစားရ, ဒါမှမဟုတ် +86 137 6034 3155 မှာမခေါ်ပါ။
ယခင်: ဥယျာဉ်အဘို့အ fiber optic Lighting, Park က optical fiber ကိုအလင်းရောင်
နောက်တစ်ခု: သစ်တောအလှဆင်, ဥယျာဉ်, ဟိုတယ်များအတွက် fiber optic အလင်း
1 year Warranty Ip44 IP Rating Led PMMA Plastic...
25W RGBW fiber optic မိုဃ်းကိုရွာစေကာစရာကုလားကာရေတံခွန် LED ...
နံရံနဲ့ c ကိုများအတွက်ဖိုင်ဘာ optic ကြယ်ပွင့်မျက်နှာကျက်ကိရိယာအစုံ LED ...
Office ကို လိပ်စာ
ရှန်ကျန်း KepuAi Photoelectric နည်းပညာ Co. , Ltd မှ